India e-Visa ho an'ny olom-pirenena Alemanina. eVisa Eligibility avy any Alemana
Visa Indiana avy any Alemaina
Fitakiana Visa Indiana ho an'ny olom-pirenena Alemana
Mangataha Visa Indiana avy any Alemaina
Ny olom-pirenena alemanina dia afaka mangataka amin'ny eVisa India
Alemanina dia mpikambana fanombohana ny programa e-Visa India
Ny olom-pirenena alemanina dia mankafy fidirana haingana amin'ny alàlan'ny programa e-Visa India
Ny olom-pirenena alemanina dia afaka mangataka amin'ny Internet amin'ny Internet e-Visa
Dingana ho an'ny olom-pirenena Alemanina hamenoana ny Application e-Visa Indiana
The Visa Indiana ho an'ny olom-pirenena Alemana (mpihazona pasipaoro) dia azo alaina amin'ny taratasy fangatahana elektronika nanomboka tamin'ny 2014. Ity dia an-tserasera Ireo fomba fiasa Indiana Visa izay tsy mila taratasy mifototra amin'ny fomba ofisialy ho fenoin'ny alemà mponina. Ity fizotrany ity dia azo zahana ato amin'ity tranonkala ity araka ny fanohanan'ny Governemantan'i India eo ambanin'ny fitondrana eVisa India.
India e-Visa dia antontan-taratasy ofisialy mamela ny fidirana sy fitetezana ao India mankany amin'ireo mponina alemà sy olom-pirenena noho ny antony fizahan-tany, ny indostrian'ny fizahan-tany, ny fitsidihana klinika, ny fihaonambe, ny yoga, ny fampianarana, ny atrikasa, ny fifampiraharahana sy ny fifanakalozana, ny ezaka maha-olona ary ny orinasa hafa Adventures amin'ity rafitra vaovao an'ny E-Visa Indiana.
Ny Visa Indiana avy any Alemaina dia azo alaina amin'ny Internet ary afaka mandoa vola ny mpangataka Euro na ny iray amin'ireo vola 135 ao anatin'izany ny Debit / Credit / Paypal.
Visa Indiana ho an'ny olom-pirenena Alemanina dia azo alaina amin'ny fomba tsotra sy mora. Ny dingana dia tsotra toy ny famenoana taratasy an-tserasera ao anatin'ny minitra vitsy, mora ny mameno ny fomba fandoavam-bola ho vita Fangatahana fangatahana Visa amin'ny Internet any India.
Aorian'ny fandefasana ny fangatahana Visa any India anao, raha mitaky porofo fanampiny toy ny kopian'ny pasipaoronao na ny sarinao ny olona dia hangataka aminao izahay. Azonao atao ny mamaly izany amin'ny mailaka anay na mampakatra azy amin'ny daty ho avy. Our Biraika fanampiana Visa Indiana afaka manampy anao amin'ny fiteny 47. Azonao atao ny mandefa anay ny mombamomba anao amin'ny Internet na amin'ny mailaka amin'ny info@evisa-india.org.in. Ny governemanta India izao dia mamela ny eVisa India ho feno olom-pirenena Alemanina noho ny fitsidihana hatramin'ny 90 andro ho an'ny fidirana marobe any India.
Misy fepetra takiana amin'ny olom-pirenena Alemanina ve hitsidika ny Masoivoho Indiana amin'ny sehatra rehetra?
Rehefa ampiharina amin'ny Internet ny Visa Indiana avy any Alemaina dia tsy misy fepetra takiana amin'ny dingana rehetra hitsidihana ny Masoivoho Indiana na Consulat Indiana. Raha vantany vao voaray amin'ny alàlan'ny mailaka ny eVisa ho an'i India, afaka mandeha mankany amin'ny Airport ianao.
Ny Indian Visa Online dia voarakitra ao amin'ny rafitra informatika afovoan'ny Governemantan'i India, ireo tompon'andraikitra misahana ny fifindra-monina dia afaka mahazo ity fampahalalana ity avy amin'ny seranam-piaramanidina rehetra manerantany. Ny anaranao sy ny laharan'ny pasipaoronao ary ny Zom-pirenena Alemanina dia voarakitra ao amin'ny rafitry ny solosaina.
Ny teratany alemanina dia takiana mba hitazona kopia mailaky ny mailaka voaray amin'ny telefaona / solosaina / tablette na kopia vita pirinty ary hitondra ny eVisa mankany amin'ny seranam-piaramanidina Misy tsy misy fepetra takiana amin'ny pasipaoro ho an'ny olom-pirenena Alemà ho an'ny elektronika Indian Visa Online (eVisa India) izay alefa amin'ny mailaka.
Takiana ve ny olom-pirenena alemanina handefa ny pasipaoro / sary / antontan-taratasy any amin'ny Masoivohon'i India?
Tsia, tsy mila mpandefa iraka na antontan-taratasy ilaina ianao hahazoana ny e-Visa Indiana. Ny olom-pirenena alemanina dia afaka mandefa ireo antontan-taratasy porofo na amin'ny alàlan'ny mailaka ho valin'ny fangatahana nataon'ny mpiasan'ny fifindra-monina na ny fangatahan'ny Governemanta India momba anao Fampiharana Indiana Visa na mampakatra antontan-taratasy amin'ity tranokala ity raha toa ka ilaina ny manohana ny Fangatahanao Visa any India. Ny rohy hampakatra antontan-taratasy takiana amin'ny Indian Visa Online (eVisa India) dia halefa any amin'ny adiresy mailaka mpangataka nomena tamin'ny fotoana nametrahany Indian Visa Online. Ny olom-pirenena alemanina dia afaka mailaka mivantana koa Birao fanampiana e-Visa any India.
Inona no fanampiana sy fanampiana azon'ny olom-pirenena alemanina alefa amin'ny fametrahana ny Indian Visa Online (India e-Visa)?
1 amin'ireo tombony lehibe amin'ny fampiharana Visa Indiana Online avy amin'ity tranonkala ity ho an'ny Governemantan'i India Visa ofisialy ofisialy dia ny ahafahan'ny olom-pirenena alemanina manome anay antontan-taratasy fanohanana ho anao Fampiharana Indiana Visa na amin'ny mailaka na ampidino amin'ny vavahady. Ho fanampin'izany, azonao atao ny mandefa mailaka an'ireo mpiasan'ny mpanjifa Visa any India misy endrika fisie toy ny JPG, TIF, PNG, JPEG, AI, SVG ary maro hafa dia mitahiry fotoana sy manahirana amin'ny fanovana rakitra na famatrarana rakitra. Mety ho an'ny mpanjifa tsy manam-pahalalana ara-teknika izany satria mety hisy ny fitsidihana ara-batana ny Masoivoho Indiana fandavana ny fangatahana Visa any India noho ny sary ratsy manjavozavo na kopia scan pasipaoro.
Raha sanatria ny tompon'andraikitry ny fifindra-monina avy amin'ny Governemantan'i India mitaky antontan-taratasy fanampiny hanohanana ny fitsidihan'ny olom-pirenena Alemanina any India, avy eo azonao atao ny manindry ity rohy ity hoe inona ireo Fepetra takiana amin'ny Visa India. Azonao atao ny mamaky momba ny takiana amin'ny antontan-taratasy ilaina eto - Fepetra takiana amin'ny sary visa any India ary Fangatahana fahazoan-dàlana ho an'ny India visa. Azonao atao ny maka sary ny pejin'ny pasipaoronao sy ny tavanao amin'ny alàlan'ny findainao na fakan-tsary ary mandefa mailaka amin'ny Indian Visa Customer Support na mampakatra ao amin'ity tranonkala ity.
Azoko atao ve ny mangataka fitsidihana raharaham-barotra any India amin'ny pasipaoro alemanina?
Afaka mangataka Visa Indiana avy any Alemaina fitsidihana orinasa ary koa mpizaha tany ary fitsaboana fitsidihana ambanin'ny Politikan'ny governemanta indianina an'ny eVisa India (India Visa Online). Ny dia ataon'ny mpivarotra alemà any India dia mety noho ny antony maro araka ny voalaza amin'ny antsipiriany ao  Business e-Visa ho an'i India.
Maharitra hafiriana ny fankatoavana ny fangatahana alemanina?
Amin'ny raharaham-barotra toy ny toe-javatra mahazatra, ny olom-pirenena alemanina izay nahavita ny endrika fangatahana visa Visa an-tserasera ary nanaraka tsara ny torolàlana ary nanonona ny anaram-bosotra, anarana, daty nahaterahana tsy nisy fifandanjana ary koa nanome antontan-taratasy fangatahana fanampiana fanampiny toa ny scan an'ny pasipaoro alemanina kopia sy Sarina tarehy na Karatra Mpitsidika raha misy ny Visa any India Business na taratasy avy amin'ny hopitaly raha E-Visa ara-pitsaboana ho an'ny India afaka mahazo ny fanapaha-kevitra momba ny Application Indian Visa ao anatin'ny 3-4 andro fiasana. Amin'ny tranga hafa, na izany aza, mety haharitra 7 andro fiasana izany arakaraka ny fahamarinan'ny angona ao amin'ny Fampiharana Indiana Visa na fialantsasatra ampahibemaso voalahatra any India amin'ny fotoana fampiharana na amin'ny vanim-potoana fialantsasatra be atao.
Inona avy ireo fotodrafitrasa azo ankafizina manoloana ny e-Visa Indiana ataon'ny olom-pirenena Alemanina?
Miankina amin'ny karazana Visa ampiharina amin'ny olom-pirenena alemanina dia afaka mahazo India Visa Online hatramin'ny 5 taona amin'ny Validity.
Visa Indiana ho an'ny olom-pirenena Alemana dia azo ampiasaina miditra India imbetsaka
Ny olom-pirenena alemanina dia afaka mampiasa eVisa India (Indian Visa Online) mandritra ny 180 andro tsy tapaka ary tsy misy fanelingelenana hiditra ao India (natao indrindra ho an'ny olom-pirenena vitsivitsy toa ny teratany Alemanina sy Etazonia, ho an'ny firenena hafa dia maharitra 90 andro ny faharetana maharitra indrindra amin'ny fitobiana mitohy any India) .
Ny Indian Visa Online dia azo ampiasaina amin'ny fitsidihana fizahan-tany, fitsaboana ary fandraharahana ataon'ny olom-pirenena alemanina
Inona avy ireo fetra mifandraika amin'ny e-Visa Indiana ho an'ny olom-pirenena Alemanina?
Misy fetrany vitsivitsy ny Indian Visa Online (eVisa India) izay: Tsy afaka manohy ny asa fanaovan-gazety, fanaovana sarimihetsika, diplaoman'ny oniversite any India na asa karama maharitra maharitra amin'ny eVisa India (India Visa Online) ny olom-pirenena Alemanina. Ho fanampin'izany, India Visa Online (eVisa India) dia tsy manome ny tombontsoa hitsidika faritra miaramila na cantonment - fangatahana misaraka no takiana amin'ny Governemantan'i India hitsidika ireo toerana arovana ireo.
Inona no tokony ho fantatry ny olom-pirenena Alemanina raha tonga any amin'ny India amin'ny e-Visa?
Ny torolàlana omena amin'ity tranonkala ity ho an'ny Indian Visa Online (eVisa India) dia ampy ho an'ny olom-pirenena Alemanina, na izany aza ny toro-lalana sy toro-hevitra fanampiny dia hanampy amin'ny fisorohana ny henatra fandavana na ny fandavana ny fidirana ao India. Visa ho an'ny orinasa indianina ary Mpitsidika mpitsidika tonga amin'ny Business Business Visa manana torolàlana mahasoa hanomanana anao amin'ny vokatra mahomby amin'ny fitsidihanao orinasa any India.
Raiso ny fanontana ny Visa Indiana alefa amin'ny mailaka: Na dia tsy ilaina aza ny fananana dika mitovy amin'ny eVisa (India Visa Online) ho an'ny olom-pirenena Alemanina, dia azo antoka kokoa ny manao izany noho ny antony mety hanimba ny findainao izay manana ny fanamafisana ny mailaka na ny bateria ho lany daty ianao ary tsy ho afaka hanome porofon'ny fahazoana visa elektronika Visa (eVisa India). Ny fanontana taratasy dia mandeha ho toy ny fanamarinana fanampiny.
Ataovy azo antoka fa manana pejy 2 banga ny Taratasy fitsangatsanganana: Ny governemantan'i India dia tsy manatona ny olom-pirenena alemà mba hahazoana mari-pamantarana visa amin'ny pasipaoro ara-batanao ary mangataka kopia scan ny pejin'ny biodata amin'ny pasipaoro mandritra ny fizotry ny fangatahana eVisa India (Indian Visa Online) ka tsy fantatsika ny isan'ny mazava. pejy ao amin'ny pasipaoronao. Tsy maintsy manana pejy 2 foana na tsy misy na inona na inona ianao mba hahafahan'ireo tompon'andraikitra amin'ny fifindra-monina ao amin'ny Departemantan'ny fifindra-monina Indiana hanisy fitomboka fizarana ary hamela hajia amin'ny famantarana anao any amin'ny seranam-piaramanidina.
Farito azafady ny fizotry ny fangatahana Visa Indiana ho an'ny olom-pirenena Alemanina?
Betsaka ny karazana Visa any India, miankina amin'ny zom-pirenenan'ilay mpitsidika. Mila mameno ireto dingana tsotra manaraka ireto ny olom-pirenena alemanina hahazoana Visa any India:
Dingana 5: azonao atao mankanesa any amin'ny seranam-piaramanidina Alemanina na avy any ivelany.
Inona no azon'ny olom-pirenena alemà atao rehefa avy nahazo Visa Indiana ankatoavina amin'ny alàlan'ny mailaka (eVisa India)?
Afaka mandeha amin'ny seranam-piaramanidina ianao na any Alemana na any amin'ny seranam-piaramanidina ivelany ary mitsidika an'i India. Amin'ny fotoana rehetra dia mila hajia amin'ny pasipaoronao ianao raha mila Visa, ary tsy ilaina ny mitsidika ny masoivoho Indiana na ny kaonsily indiana.
Manao ahoana ny e-Visa ho an'i India ho an'ny mponin'i Alemana?
Ilaina ve ny Visa Indiana ho an'ny olom-pirenena Alemanina raha tonga amin'ny sambo sambo?
Zavatra 11 sy toerana mahaliana ho an'ny teratany alemanina
Ny Stupa Lehibe, Sanchi
Ny Tempolin'i Chola velona velona, ​​Thanjavur
Oniversite Nalanda, Bihar Sharif
Lapan'i Cooch Behar, Cooch Behar
Fasan'i Akbar, Agra
Valan-javaboary Sundarbans, Parganas atsimo 24
Tempolin'i Ramanathaswamy, Rameswaram
Masoivoho Alemana ao New Delhi